Kwa Ụbọchị Nyocha Ahịa | FXCC
OKWỤKWỌ NDỊ MARKETING DISCLAIMER: Ihe odide nke ihe a bu nkwuputa ahia, ma obughi ihe omuma nke onwe. Dị ka ndị dị otú ahụ, iwu na usoro iwu na-achọ maka nchọpụta ego nyocha onwe onye anaghị emetụta ihe a ma ọ bụghị iwu ọ bụla iji gbochie ya n'ihu mgbasa ozi ya.
Ihe omuma a bu maka ebumnuche ozi n'ozuzu (ma o bu ihe o bula). Ọ gaghị ewere ọnọdụ gị ma ọ bụ ebumnuche gị. Enweghị ihe ọ bụla dị na ihe a (ma ọ bụ ka a ga-ewere dịka) iwu, ego, ego ma ọ bụ ndụmọdụ ndị ọzọ a ga-etinye na ndabere. Enweghị echiche e nyere na ihe a bụ nkwenye sitere na FXCC ma ọ bụ onye edemede na ego ọ bụla, nchekwa, azụmahịa ma ọ bụ atụmatụ ego ga-adabara onye ọ bụla.
Ọ bụ ezie na a na-enweta ozi ndị a na-enweta na nkwukọrịta ahịa a site na isi mmalite kwenyere na a pụrụ ịdabere na ya, FXCC anaghị eme nkwa ọ bụla maka eziokwu ya ma ọ bụ zuru ezu. Ozi niile na-egosi na ọ ga-agbanwe na-enweghị ọkwa na enwere ike ịpụ na ụbọchị n'oge ọ bụla. FXCC, ma ọ bụ onye edemede nke ihe a ga-enwe ụgwọ maka ọnwụ ọ bụla ị nwere ike imetụta, ma ọ bụ na-apụtaghị ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla, na-esite na ego ọ bụla dabere na ozi ọ bụla dị n'ime ebe a.
Ihe omume a nwere ike ịgụnye chaatị ndị na-egosipụta ngwá akụ na ụzụ 'arụmọrụ n'oge gara aga yana atụmatụ na amụma. Ozi obula gbasara oru ugbua nke ulo oru uzo abughi ihe kwesiri ime ka odi n'iru.
Ọ gwụla ma e kwuru ya, ọnụahịa ndị e ji mee ihe atụ bụ ego FXCC, ọ bụghị nke ndị ọzọ.
Mepee Akaụntụ ECN Taa!
Mba Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua na Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia, Plurinational State of Bosnia na Herzegovina Botswana Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo, na Democratic Republic of the Cook Islands Costa Rica Cote d'Ivoire C Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern n'ókèala Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Nsọ Lee (Vatican City State) Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran, islam Republic of Iraq Ireland Isle nke Mmadụ Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jọdan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, Democratic Ndị Mmadụ Republic of Korea, Republic of Kuwait Kyrgyzstan Lao Ndị mmadụ Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia, bụbu Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federated States of Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestinian Territory, N'ịbụ Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Nzukọta R Romania Russian Federation Rwanda Saint Barth Saint Helena, nrịgo Jizọs rịgoro n'eluigwe na Tristan da Cunha Saint Kitts na Nevis Saint Lucia Saint Martin (French akụkụ) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent na Grenadines Samoa San Marino São Tomé na Príncipe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia na South Sanwichi Islands Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard na Jan Mayen Swaziland Sweden Switzerland Siria Arab Republic Taiwan, Province of China Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad na Tobago Tunisia toro toro Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of Viet Nam Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
AKWỤKWỌ NDỊ KWURU Ugbu a
Ịzụ ahịa Forex dị ize ndụ.
Ị nwere ike idafu ego isi ego gị niile.